Coral Reef: ဝေဟင်ပေါ်က အမှတ်တရများ - ၂
espaniage said on July 16, 2011 at 9:01 PM
although it's not the same ingredients, this post somehow reminds me of George Clooney's movie "Up in the Air".
ဇွန်မိုးစက် said on July 23, 2011 at 9:10 AM
@espaniage... thanks for your comment and it makes me to watch that movie which I have not seen yet.
Nyi Linn Thit said on July 24, 2011 at 3:53 AM
ဇွန်က လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တကယ်ပဲ လေ့လာစူးစမ်း တတ်တယ်နော်၊ ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်၊ လေယာဉ်မယ်၊ လေယာဉ်မောင်တွေ၊ အတူစီး ခရီးသည်တွေ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ သရုပ်ပြ တွေ၊ ...၊ အများကြီးပါပဲ၊ ဒါတွေကိုလည်း အတော်ပဲ မှတ်မိနေပုံပါပဲ၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒီလို ပို့စ်တွေက ဖတ်ကောင်းတာ ဖြစ်မယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှု အားကောင်းတဲ့ လူတွေမှာ ပြောစရာတွေ အမြဲ ရှိနေတတ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား၊ KLM ကို ဇွန်က အကြိုက်ဆုံး ဆိုတာတော့ မအံ့သြမိပါဘူး၊ KLM နာမည် ကိုက ဒီအတိုင်း ဖြစ်စရာပဲကိုး၊ Kiss me, Leave me, Miss me တဲ့...။း)
ဇွန်မိုးစက် said on July 26, 2011 at 9:40 PM
ကိုညီလင်းသစ်ပြောသွားတဲ့ KLM ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အရမ်းသဘောကျသွားပြီ။ ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါဆိုတာမျိုး ထင်ပါရဲ့နော်။း)
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on August 11, 2011 at 12:59 PM
လွမ်းလို့ လာ၏ :(